UGadaffi udalula esokushiya iGenerations: The Legacy | News24
UGadaffi udalula esokushiya iGenerations: The Legacy
Johannesburg - UVuyo Dabula ushaqise abalandeli abaningi ngesikhathi ememezela ngokushiya kwakhe emdlalweni owuchungechunge kumabonakude iGenerations: The Legacy ekuqaleni kwenyanga, usedalule isizathu sangempela sokushiya kwakhe kulo mdlalo.
"Nganginokungabaza kwasekuqaleni ngokujoyina lo mdlalo," kusho uDabula odlala indawo kaKumkani “Gadaffi” Phakade engxoxgweni abenayo nabeThe Citizen.
OLUNYE UDABA: UJack Mabaso kwiGenerations: The Legacy
UDabula utshele abephephandaba ukuthi wawujoyina phela lomdlalo kodwa nje ubazi ukuthi angeke aze ahlale kuwo isikhathi eside.
Ngokusho kwabephepha lo mlingisi oneminyaka engu-38 ubudala, uthe ukube uhlalile, ukulingisa kwakhe kweqophelo eliphezulu bekuzodidiseka njengoba ukudlala emidlalweni efana nale zonke izinto ziyashesha futhi kubhekwa kakhulu ubuningi bawo kunezinga eliphezulu lokulingisa.
UDabula uqinisekise abalandeli ukuthi ukuhamba kukaGadaffi akuchazile ukuthi angeke aphinde abonakale yena, kubnika iTimeslive.